Jeremaya gwara Barọk ihe ọ ga-ede, ya edee ya n’akwụkwọ mpịakọta (1-7)
Barọk gụpụtaara ndị mmadụ ihe dị n’akwụkwọ mpịakọta (8-19)
Jehoyakim gbara akwụkwọ mpịakọta ahụ ọkụ (20-26)
E deghachiri ihe Jeremaya kwuru n’akwụkwọ mpịakọta ọzọ (27-32)
36 N’afọ nke anọ n’ọchịchị Jehoyakim+ nwa Josaya bụ́ eze Juda, Jehova gwara Jeremaya, sị: 2 “Were akwụkwọ mpịakọta dee ihe niile m gwara gị na m ga-eme ndị Izrel na ndị Juda+ na mba niile,+ ya bụ, ihe niile m gwara gị malite n’ụbọchị mbụ m gwara gị okwu n’oge Josaya nọ ndụ ruo taa.+ 3 Ikekwe, ndị Juda nụ gbasara ọdachi niile m bu n’obi ime ka ọ dakwasị ha, ha nwere ike hapụ ihe ọjọọ ndị ha na-eme, mụ agbagharakwa ha njehie ha na mmehie ha.”+ 4 Jeremaya kpọziri Barọk+ nwa Neraya gwa ya ihe niile Jehova gwara yanwa bụ́ Jeremaya, Barọk edee ha n’akwụkwọ mpịakọta.+ 5 Jeremaya wee gwa Barọk, sị: “A naghịzi ekwe m banye n’ụlọ Jehova. 6 N’ihi ya, banye ebe ahụ gụpụta okwu Jehova m gwara gị ka i dee n’akwụkwọ mpịakọta. Gụpụta ya ka ndị nọ n’ụlọ Jehova n’ụbọchị a na-ebu ọnụ nụ ya. Gụọkwara ya ndị Juda niile si n’obodo ha dị iche iche na-abata. 7 Ikekwe, Jehova ga-anụ arịrịọ ha ga-arịọ ka o meere ha amara, hanwa ahapụkwa ihe ọjọọ ha na-eme, n’ihi na Jehova kwuru na ọ ga-eji iwe na ọnụma dị egwu mee ha ihe.” 8 Barọk nwa Neraya wee mee ihe niile Jeremaya onye amụma gwara ya. Ọ gara n’ụlọ Jehova gụpụta ihe Jehova kwuru nke dị n’akwụkwọ mpịakọta ahụ.+ 9 N’ọnwa nke itoolu n’afọ nke ise n’ọchịchị Jehoyakim+ nwa Josaya bụ́ eze Juda, ndị niile bi na Jeruselem nakwa ndị niile si n’obodo ndị dị na Juda na-abata Jeruselem malitere ibu ọnụ n’ihu Jehova.+ 10 Barọk gụpụtakwaara mmadụ niile ihe Jeremaya kwuru nke dị n’akwụkwọ mpịakọta ahụ. Ebe ọ nọ gụpụta ya bụ n’ụlọ Jehova, n’ụlọ Gemaraya+ nwa Shefan+ bụ́ odeakwụkwọ* na-anọ eri ihe, n’ogige nke dị ná mgbago, n’ebe e si abanye n’ọnụ ụzọ ámá ọhụrụ dị n’ụlọ Jehova.+ 11 Mgbe Mịkaya nwa Gemaraya nwa Shefan nụrụ ihe niile Jehova kwuru, ndị a gụpụtara n’akwụkwọ mpịakọta ahụ, 12 ọ gara n’ụlọ* eze, n’ụlọ odeakwụkwọ na-anọ eri ihe. Ndị isi niile* nọ ọdụ n’ebe ahụ, ma Elishama+ bụ́ odeakwụkwọ ma Deleya nwa Shemaya ma Elnetan+ nwa Akbọ+ ma Gemaraya nwa Shefan ma Zedekaya nwa Hananaya ma ndị ọzọ niile bụ́ ndị isi. 13 Mịkaya gwara ha ihe niile ọ nụrụ mgbe Barọk gụpụtaara ndị mmadụ ihe dị n’akwụkwọ mpịakọta ahụ. 14 Ndị isi ahụ niile wee zie Jehudaị nwa Netanaya nwa Shelemaya nwa Kọshaị ka ọ gaa gwa Barọk, sị: “Were akwụkwọ mpịakọta ahụ ị gụpụtaara ndị mmadụ bịa.” Barọk nwa Neraya wee were akwụkwọ mpịakọta ahụ gakwuru ha. 15 Ha wee sị ya: “Biko, nọdụ ala, gụpụtara anyị ya.” Barọk wee gụpụtara ha ya. 16 Ozugbo ha nụrụ okwu ahụ niile, ezigbo ụjọ jidere ha, ha elerịta ibe ha anya ma gwa Barọk, sị: “Anyị ga-agwarịrị eze ihe a niile ị gụpụtara.” 17 Ha jụkwara Barọk, sị: “Biko, ọ̀ bụ Jeremaya gwara gị dee ihe a niile?” 18 Barọk asị ha: “Ọ bụ ya kwuru ihe a niile, mụnwa ejiri ịnk dee ha n’akwụkwọ mpịakọta a.” 19 Ndị isi ahụ gwaziri Barọk, sị: “Gị na Jeremaya gaa zoo. Unu agwakwala onye ọ bụla ebe unu nọ.”+ 20 Ndị isi ahụ dowere akwụkwọ mpịakọta ahụ n’ụlọ Elishama bụ́ odeakwụkwọ na-anọ eri ihe, gakwuru eze ebe ọ nọ n’ogige dị n’ụlọ ya ma gwa ya ihe niile ha nụrụ. 21 Eze wee zie Jehudaị+ ka ọ gaa weta akwụkwọ mpịakọta ahụ, ya agaa n’ụlọ Elishama bụ́ odeakwụkwọ na-anọ eri ihe weta ya, bidokwa ịgụpụtara ya eze na ndị isi niile guzo n’akụkụ eze. 22 Ihe a na-eme n’ọnwa nke itoolu,* eze nọkwa ọdụ n’ụlọ ọ na-anọ n’oge oyi, na-anya ọkụ a kwanyere n’ite ọkụ dị ebe ahụ. 23 Mgbe ọ bụla Jehudaị gụrụ nkebi atọ ma ọ bụ anọ n’akwụkwọ ahụ, eze ejiri mma odeakwụkwọ chabie ya ma tụba ya n’ọkụ na-enwu n’ite ọkụ ahụ. O megidere ihe a ruo mgbe ọkụ ahụ rechapụrụ akwụkwọ mpịakọta ahụ niile. 24 Ha atụghị ụjọ ọ bụla. Ma eze ma ndị niile na-ejere ya ozi, bụ́ ndị nụrụ okwu a niile, adọwaghị uwe ha. 25 Elnetan,+ Deleya,+ na Gemaraya+ nọ na-arịọ eze ka ọ ghara ịgba akwụkwọ mpịakọta ahụ ọkụ, ma o geghị ha ntị. 26 Eze gwakwara Jeramiel bụ́ nwa eze na Seraya nwa Azriel na Shelemaya nwa Abdiel ka ha gaa kpụta Barọk bụ́ odeakwụkwọ na Jeremaya onye amụma. Ma Jehova zoro ha.+ 27 Mgbe eze gbachara akwụkwọ mpịakọta ahụ Barọk dere ihe Jeremaya kwuru ọkụ,+ Jehova gwara Jeremaya ọzọ, sị: 28 “Were akwụkwọ mpịakọta ọzọ dee ihe ahụ niile e dere n’akwụkwọ mpịakọta mbụ ahụ Jehoyakim eze Juda gbara ọkụ.+ 29 Kwuokwa ihe ga-eme Jehoyakim eze Juda. Kwuo, sị, ‘Jehova kwuru, sị: “Ọ̀ kwa ị gbaala akwụkwọ mpịakọta a ọkụ, sị, ‘Gịnị mere i ji dee na eze Babịlọn ga-abịarịrị bibie ala a na ndị mmadụ nakwa anụmanụ?’+ 30 N’ihi ihe a Jehoyakim eze Juda mere, mụnwa bụ́ Jehova ekwuola ihe ga-eme ya. M sịrị, ‘E nweghị nwa ya ọ bụla ga-anọchi ya n’ocheeze Devid.+ Ozu ya ga-atọgbọ n’ala n’ehihie anwụ na-acha, tọgbọrọkwa n’abalị ezigbo oyi na-atụ.+ 31 M ga-eme ka ya na ụmụ* ya na ndị na-ejere ya ozi zaa ajụjụ maka mmehie ha. M ga-emekwa ka ọdachi niile m kwuru ga-adakwasị ha na ndị bi na Jeruselem na ndị Juda dakwasị ha,+ maka na ha egeghị m ntị.’”’”+ 32 Jeremaya weere akwụkwọ mpịakọta ọzọ nye Barọk nwa Neraya, bụ́ odeakwụkwọ.+ Jeremaya nọkwa na-agwa ya ihe ọ ga-ede, ya ana-ede. O dere ihe niile dị n’akwụkwọ mpịakọta ahụ Jehoyakim eze Juda gbara ọkụ.+ A gbakwụnyekwara ya ọtụtụ ihe ọzọ yiri ndị mbụ ahụ.
^ Ma ọ bụ “onye na-edepụta ihe dị n’Akwụkwọ Nsọ.”
^ Ma ọ bụ “Ndị niile na-eje ozi n’obí eze.”
^ Ọnwa nke itoolu a bụ malite mgbe ọnwa Nọvemba gara ọkara ruo mgbe ọnwa Disemba gara ọkara. Gụọ B15.